Mirongatra ny aretina ambalavelona. Lasibatra ny tovovavy mpianatra ao amin’ny kaominina Mandialaza, distrikan’i Moramanga. 27 vavy be izao no mifandimby mihetsika. Efa niantsoana mpiandry fa ny mahagaga dia miseho hatrany ny aretina mampihinjakianjaka ireto tovovavy ireto isaky ny alatsinainy maraina fiandohan’ny herinandro. Very hevitra ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny.
Pretra malagasy iray voasoloky vola an-tapitrisany. Afrikana roa no tompon’antoka. Nitalaho sakafo fa nilaza ho tsy manana hanin-kohanina ireto farany, ary niangavy mba hivantana tao amin’ny mompera. Tsy nisalasala ity relijiozy ity fa nandray azy ireo, ary nanome izay nilana maika. Nampiasa tetika rehetra hahazoana vola tamin’ny mompera izy ireo efa vola an-tapitrisany no lasan’izy roa vao tonga saina mompera, ary nametraka fitoriana tany amin’ny polisy. Nosamborina ireo Afrikana roa ireo ary natolotra ny fitsarana omaly.
Tokony ho eo amin'ny 30 tafo teo ny tsenan'ny tantsaha may kila forehitra teny Namontana, araka ny filazan'ireo mpivarotra voakasik'izany dia afo avy ao amin'ny hotely teo an-toerana ihany no nahatonga ny afo.
Antanandrano : Mimenomenona amin’ny tabataban’ny gropy ny mponina
Mampitaraina ny mponina eny Antanandrano ny tabataban’ny gropy mpihary herinaratra vao naorina eny an-toerana. Misy ny fanangonan-tsonia ataon’ny eny manodidina, hanerena ny tomponandraikitra hitadiavana vahaolana amin’io trangan-javatra.
Fandravana tranon'ny Fisemare
Noravana ny trano tetsy Ankadifotsy, nanomboka tamin'ny dimy ora sy sasany no efa efa natomboka ny fandravana noho ny resaka ady tany.
vendredi, 13 novembre 2015 16:20
Alerte amin'izao ao Mandoto, manafika ny dahalo, raikitra ny fifanenjehina
vendredi, 13 novembre 2015 09:04
Fifidianana kaominaly averina : Andron’ny latsabato anio tontolo andro
Tanterahina anio 13 novambra tontolo andro, manerana ny Kaominina miisa 19 eto amin’ny Nosy ny fifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolotsaina. Fifidianana averina io, noho ny tsy fahatomombanana sy hosoka niseho tamin’ny fifidianana natao ny 31 jolay 2015.
Tanambao Daoud Sambava
jeudi, 12 novembre 2015 09:02
Tanambao Daoud : Trano 43 kilan’ny afo
Nitrangana haintrano nahatsiravina tao Tanambao Daoud-Sambava, tanàna fiavian’ny praiminisitra teo aloha Beriziky Jean Omer, ny alarobia 11 novambra 2015 tokony ho tamin’ny 2ora sy sasany tolakandro. Zaza nahandro sakafo no niandohan’ny loza. Nisy vainafo latsaka, ny trano anefa vita tamin’ny satrana. Izy lasa natsaka rano ny afo niledaka sy niitatra malaky. Trano niisa 43 no indray kilan’ny afo, tamin’ny fotoana naha tany an-tsaha ny olon-dehibe, ny ankizy tany ampianarana. Tsy nisy aina nafoy na naratra.
Mpivarotra rongony Mahabibo Mahajanga
jeudi, 12 novembre 2015 08:58
Mahajanga : Mpivarotra rongony noraisim-potsiny tao an-tsenan’i Mahabibo
Fahasahiana goavana ny an’ity tovolahy iray, sahy mivarotra tsy amin’ahiahy rongony ao an-tsenan’i Mahabibo. Nisy nampandre tamin’ny polisy ny fisiany. Poa tahak’izay ireto farany dia tonga nisambotra azy omaly alarobia. Iray andro talohan’io indray, nahazo loharanom-baovao ny polisy fa misy lehilahy avy any Ambanja mitondra rongony roa gony tonga ao Mahajanga. Natao ny fanarahan-dia azy, ka tratra tao Tsararano. Milanja 90 kilao ireo rongony tratra tany aminy izay kasaina haondrana any Kaomoro.
mercredi, 11 novembre 2015 21:46
Photo: Mydago.com Archives
Nivoaka ny hopitaly androany alarobia i Manandafy Rakotonirina lehiben'ny antoko MFM. Efa mihatsara ny toe-pahasalamany ary dia efa tonga soa amantsara ao antokatranony izy na dia mbola manaraka fitsaboana sy tsy manao vizaka araky ny torimarik'ireo mpitsabo azy tao amin'ny HJRA.
Page 619 sur 638